ရှညောသား: September 2018
ထားပြီးသုံးခါနီးမှ မီးဖိုပေါ်မြေအိုးကင်းတည်ပြီးလှော် အအေးခံပြီးငရုတ်ဆုံနဲ့ညက်အောင်ထောင်းပြီး အသုပ်ထဲထည့်တာ။ချက်ချက်လှော်ချက်ချက်သုပ်ဆိုတော့အနံ့ကိုမွှေးနေတာပါပဲ။အခုဟာကတော့ရှိတာနဲ့
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, September 16, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စားလို့ရပါပြီ။ငရုတ်သီးကြက်သွန်ဖြူထောင်း ငါးပိကောင်ကြော်တို့နဲ့ တွဲစားလို့အရမ်းကောင်းပါတယ်။
ချဉ်ဆိမ့်လေးနဲ့ ထမင်းမြိန်တဲ့ အညာဟင်းတခွက်ပါ
ဒါကတော့ ကျောင်းမှာညဉ့်နက်အောင်နေရတဲ့အခါညနေစာအလွယ်စားလို့ရအောင် ငါးနီတူခြောက် မြေပဲဆံကြော်ကို ထိုင်းတွေရောင်းတဲ့ကြက်သွန်ကြော်နဲ့ရောထားတာ။ ဗူးနဲ့ထည့်ပြီး ဌာနကရေခဲသေတ္တာထဲမှာထားတယ်။ညနေစာကိုနေ့လယ်ထမင်းစားပြီးတာနဲ့ ထမင်းဖြူတထုပ်
ပါဆယ်ထုပ်ထားပြီးရေခဲသေတ္တာထဲမှာထည့်ထား။အလုပ်ပြီးလို့ညပိုင်းဗိုက်ဆာမှာ ရေခဲသေတ္တာထဲကယူပြီး မိုက်ခရိုဝေ့နဲ့ပြန်နွှေးစားတယ်။
မြန်မာဆိုင်တွေမှာကြော်ရောင်းတာက ဒီပန်းကန်ထဲကပမာဏပါတဲ့တဗူးကို ဘတ် ၅၀ မြန်မာငွေ ၂ ထောင်နီးပါး။ ဟင်းချိုမှုန့်အချောင်းလိုက်နဲ့ဗျ။ ကိုယ်တိုင်ကြော်တော့ အားလုံးဘတ်တစ်ရာဖိုးလောက်ကျတာ
အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာပြီးကောင်းကျိုးလိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝကြပါစေဗျာ။ ကျနော့်အိမ်လေးဆီလာလည်တဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်လည်းရောက်ရင် ဝင်ခဲ့ပါဗျး)
စာရေးသူ ရှညောသား at Thursday, September 06, 2018 1 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook